SOMALIA: Al-Shabaab oo La Wareegtay Gacan ku Hayanta Magaalada Dekadda leh ee Marka | Maalmahanews
SOMALIA: Al-Shabaab oo La Wareegtay Gacan ku Hayanta Magaalada Dekadda leh ee Marka
Muqdisho-(Maalmaha News)-Wararka naga soo gaaraya degmada Marka ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in xoogag ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay la wareegeen degmada Marka, kaddib markii ay isaga baxeen ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM.
Sida ay sheegayaan goob joogayaal ku sugan magaalada Marka, daqiiqado kaddib markii ay isaga baxeen ciidamada huwanta ah ayaa waxaa dhinaca bari ka soo galay maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab, iyagoona fariisimo cusub ka sameystay gudaha iyo magaalada daafaheeda.
Al-Shabaab ayaa calankeeda ka taagtay bartamaha magaalada Marka, iyagoona halkaasi ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku baadi goobayaan madaxda iyo xubnaha taageersan Dowladda Federaalka.
Jawiga magaalada Marka ayaa saameyn weyn ku yeeshay magaalada Marka, kaddib markii uu yaraaday isu socodka dadka, gaadiidka iyo ganacsiga magaaladaasi.
Talisyada dowladda iyo AMISOM oo iyagu horay gacanta ugu hayay magaalada Marka ayaan wax hadal ah ka soo saarin ka bixitaankooda magaaladaasi, iyagoo gebi ahaanba faarujiyay magaalada Marka iyo qeybo ka tirsan gobolka Sh/hoose
Maalmaha News Desk